Kwinto yokubhiyozela uNyaka omtsha-2016, iifoto ezingama-50 zento yokugqoka. Yimiphi imibala yokubhiyozela uMnyaka omtsha weMonkey, isithombe
Yintoni yokubhiyozela uNyaka omtsha 2016 - unyaka weMonkey Fiery
Ngento enxiba ngayo uNyaka omtsha, abafazi befestile baqala ukucinga ngaphambi kweeholide. Akunanto yinto ... Ingubo yonyaka omtsha ayiyi kudala impumelelo kuphela phakathi kwesini esahlukileyo kwindibano yeholide, kodwa izisa inhlanhla ngonyaka ozayo. U-2016 uya kudlula ngaphantsi komqondiso weMonkey Fire, oku kuthetha ukuba lixesha lokuphuma kwisihlwele kwaye uvumele ukuba ube lukhululekile ngakumbi ...
Imibala eya kudibana noMnyaka omtsha 2016 weMonkey
Ukuthandwa nguMgqomo oBomvu - umbala obomvu kunye nayo yonke imibala yayo: obomvu, i-crimson, i-coral, i-bordeaux. Imibala efudumeleyo ebanjwe elangatyeni, nayo ifanelekile ekudaleni umfanekiso woNyaka omtsha. Phakathi kwabo - i-orange, isiqatha, isanti, imdaka.
Ukusuka kwipalali ephakamileyo, ungakhetha loo mibala esondele kumbala wendalo weenkwenkwe kunye nokuhlala kwayo: ikhofi, eluhlaza, i-khaki, emnyama, eluhlaza.
ISimboli soNyaka onyaka-2016 uthanda ukuba phakathi kwenkalo, oko kuthetha ukuba yonke into eqaqambileyo kwaye ekhanyayo iyayithanda. Ngaba ufuna ukukholisa umsikazi womkhosi? Emva koko udibanise uNyaka omtsha ngengubo yombala wegolide okanye wesiliva.
Yintoni yokubhiyozela uNyaka omtsha 2016: izitayela ezigqithileyo
Ixesha lokushiya ukuthozama kwakho kwixesha elidlulileyo, kwaye ukuhlangabezana nekamva ngeengubo ezinesibindi, ezintle. Kule nkwenkwe yomlilo isisithi. Ubungakanani bengubo abukhathali: ingaba i-cocktail emfutshane, okanye ngokuhlwa ebusuku. Kubalulekile ukwenza isichazamiso sokwehlisa kunoma iyiphi enye inxalenye yomzimba. Ingaba yimilenze evulekile, ibuyiselwe emuva, i-incision ephezulu, ifakwe emagxeni, iinqununu, kunye nokunye. Kodwa awukwazi ukubonisa kakhulu, ngaphandle koko ubeka umngcipheko ukuwela umgca wongcolileyo.
Yintoni enxiba ngayo uNyaka omtsha: ukushicilelwa kwetropiki
Ngaba akunjalo? Emva koko khetha iingubo ezinemibala enemibala emnandi, iindwangu zamanzi ezintle. Iimonki - abemi be-jungle, kwaye ngoko-ke bangabonakaliyo-nto yendalo. Iinyoni ezinemigodi ye-motley, iintyatyambo ezinemibala eqaqambileyo, amaqabunga esundu kunye nezityalo ezingaqhelekanga ziza kubonakala kungekuphela kweeholide zeholide zeholide, kodwa nakwintsimbi kaNtshonalanga.
Ziziphi iimpahla zokubhiyozela uNyaka omtsha 2016: isicwecwe kunye nobutyebi
I-Velvet, isikhumba, i-silk kunye ne-organza zixhobo ezixabisa, ngokukhawuleza zichaze isimo sabo kunye nesimo sabo kwimeko yabo. Yenza ibheji kubo ngo-Eva weNtsha omtsha, ukuba unokungabaza ukubhiyozela uNyaka omtsha 2016.
Yintoni enxiba ngayo uNyaka omtsha 2016: chic kwaye ukhanyise
Ukuba iimpahla zokugqoka zakho azikhanyeli kwaye azidibanisi, silungisa imeko ngeendlela ezongezelelweyo. Ziyakwazi ukubeka i-sequin, ubuhlalu, ubuqili. Kodwa qaphela kwaye ulinganise ukuze ungadideki nomthi weKrismesi.
Iifayile ezivulekileyo okanye i-guipure kwisambatho - ukhetho lwabasetyhini bokwenene abakhetha ukhetho olungqongqo nolunzulu. Baya kwenza njengeniso.
Yintoni yokubhiyozela uNyaka omtsha 2016: ingcamango engaqhelekanga
Enyanisweni, kukho iimbono ezininzi apho izambatho zokubhiyozela uNyaka omtsha. Ngokwesiko, ngesizathu esithile, baqwalasela iindlela zokugqoka, kodwa i-overalls e-stylish ingabonakala ingabonakali kakuhle kwaye ibhinqa.
Imfashini yabasetyhini abancinci
Indlela yokugqoka isitayela ngesisindo esingaphezulu
Indlela yokugqoka njenge-stylist: iindlela ezi-3 zebhajethi yokwenza i-wardrobe yakho ifakeke
Ukulungelelanisa ukuxilwa kwentamo
Imvubelo yeBrewer ngenjongo yokwelapha
UNeil Patrick Harris
10 iimpazamo eziqhelekileyo ezinyamekweni
I-tose tofu: izakhiwo ezixhamlayo
Iimbali eziqhelekileyo eziqhelekileyo ngeengozi zeefowuni
Uhlambulule umzimba ngosuku olunye? Akukho ngxaki!